प्रकृतिकाे नियम अनाैठाे छ, संसारमा अद्भुत र अार्श्चयजनक धेरै वस्तुहरू छन जुन मानिसले सजिलै यसकाे अन्त पाउन सक्दैनन । अाकाशभरी चम्किला तारा भएर पनि रात किन कालाे हुन्छ ? हुन त यस्ता प्रश्नले बालापनकाे सम्झना गराँउदछ । तर हामीलार्इ थाहा छ कि हाम्राे पृथ्वी सुर्यकाे प्रकाशबाट उज्यालाे हुन्छ, जब पृथ्वी अाफनाे अक्षमा घुम्दा घुम्दै सूर्यकाे विपरित दिशामा पुग्दछ र रात पर्दछ अर्थात अन्धकार हुन्छ।
शताब्दीयाै देखि वैज्ञानिकहरूलार्इ यो प्रश्नले सताउदै अाएकाे छ कि यदि ब्रह्माण्डमा असंख्य ताराहरू छन्, जुन आकाशमा चम्कनछन तर पृथ्वी भने कालाे हुन्छ । १९ औं शताब्दीमा बैज्ञानिकहरू ब्रह्माण्ड अनन्त छ, त्यहाँ कुनै अन्त छैन र यो समय संग कहिल्यै परिवर्तन हुदैन भन्ने मान्यता राख्दथे। त्यस समयमा आकाश ठूलो चलचित्रको रूपमा देखा पर्थाे, जहाँ अन्गन्ति ताराहरू सधैं चम्किरहेका हुन्थे ।
लेखक एडगर अलन पोईले लेखेकाे निबन्ध “यूरेका”मा ब्रह्माण्ड को बारे हामीले जानेका केहि तर्क सही नभएकाे बताइएकाे छ । उनी भन्छिन्, “यदि ताराहरू एकै अवस्थामा स्थिर हुन्थे वा सिमित मात्रामा थिए भने तिनीहरूकाे आकृति हरेक रात उस्तै देखिन्थ्याे । र सम्पूर्ण ब्रहमाण्डबाट हेर्दा अाकाश सबैतिर एउटै देखिन्थ्याे ।
अाकाश र विज्ञानमा उनको अत्यधिक रूचिका कारण उनले याे विषयमा बृहत अध्ययन गरेका थिए । यसबारे उनकाे एउटा तर्क थियाे,कि ब्रह्मांड अनन्त छ। जुन त्यतिबेलाकाे वैज्ञानिक तथ्यलार्इ पनि एक किसिमकाे चुनाैति थियाे । तर हरेक तर्कमा रात कालाे हुनुकाे कारणबारे प्रश्न उठाइएकाे थियाे । यो संगै ब्रहमाण्ड किन अन्नत छ र यहाँ भएका हरेक चिजहरू कसरी स्थिर अवस्थामा छन भन्ने प्रश्नकाे उत्तर अहिले सम्म पत्ता लाग्न सकेकाे छैन । तर वैज्ञानिकहरूले यस विषयमा पनि अध्ययन गरीरहेका छन ।
एक किसिमकाे विरोधाभास
लामो समय देखि, सम्भवतः पृथ्वीकाे उत्पत्ती भएदेखिनै रात कालो थियो तर यसको अस्तित्वसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोह्रौं शताब्दीमा मात्र सोध्न थालीएकाे थियाे । तर खगाेलशास्त्रीहरूले यी प्रश्नहरूको संतोषजनक उत्तर पाउन लामो समय लगाए । जर्मन खगोलविद् हेनरिक विल्हेल्ल ओल्बर्सकाे मनमा साेह्राै शताब्दि तिर याे प्रश्नले डेरा जमायाे कि आकाशमा लाखौँ उज्यालो ठाउँहरू छन्, तर पनि रातमा अन्धकार किन त?
उनले यो तर्कसंगत कुरालार्इ विरोधाभाषकाे रूपमा लिइयाे । यस पछि, मानिसहरूको रुचि यस विषयमा बढ्दै गयाे र मानिसहरूकाे बिचमा विवाद सिर्जना हुन थाल्याे । करीब १९अाै शताब्दीको दोस्रो दशकमा, ओलबेर्सले यस विरोधाभासी प्रक्रियालाई ओल्बर प्याराडक्सकाे नाम दिइन ।
एडगर एलन पोईको निबंध “युरेका”मा भनिएकाे छ, लामो समयको खगोल विज्ञानको बारेमा कुनै गलत धारणा छैन र आकाशका ताराहरूको बारेमा जति अनुसन्धान र अध्ययन गरीएकाे छ , सायद अरू विषयमा गरीएकाे छैन । उनी अगाडी भन्छिन, अाकाशमा अन्गिन्ती चम्किला ताराहरू छन जुन गणना गर्न समेत असम्भव छ तर अचम्मकाे कुरा याे हाे कि त्यति प्रकाश हुदाँहुदै पनि रातमा अध्याराे किन हुन्छ त? एक किसिमले साेच्ने हाे भने उनकाे याे तर्क एकदम सहि थियाे ।यदि हामीले शुक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट अन्तरिक्षमा हेर्याै भने अधिकांस ठाँउ खाली देखिन्छ । तर त्यहाँ यस अनन्त ब्रह्माण्ड यति टाढा पनि हुन सक्छ कि त्यहाँबाट निस्कने प्रकाशका किरणहरू हामी समक्ष पुग्दैनन जसकाे बारेमा धेरै कुराहरू छन जुन हामीलाई थाहा थिएन।
बीसौं शताब्दीसम्म, खगोलशास्त्रीहरूले विश्वास गरे कि ब्रह्माण्डमा सबै ताराहरू गणना गर्न असम्भव थियो। उनले याे पनि विश्वास गरे कि अन्तरिक्ष अन्नत छ। प्याराडक्सको बिन्दु साबित गर्न केही उन्नाइसाै शताब्दीका वैज्ञानिकहरू भन्छन , ती ताराहरू बीचको धुलाेका असङ्ख्य बादलहरू छन जसले ताराहरूबाट अाएकाे सम्पुर्ण प्रकाशका किरणहरू साेसिदेने गर्दछन ताकि पृथ्वि सम्म अाउन नपाउन् । यद्यपि तिनीहरूले याे पत्ता लगाएनन कि यो बादलले यति धेरै ऊर्जालाई साेस्छन कि तिनीहरू अाफै चम्किन थाल्दछन ।
यसपछि, यस सन्दर्भमा वैज्ञानिकले नयाँ अवधारणाहरू ल्याए । उनीहरूले याे पनि पत्ता लगाए कि ब्रह्माण्ड अन्नत हाेइन । ब्रह्मांड एक सीमित स्थान हो जहाँ त्यहाँ अरबौं ताराहरू छन् तर तिनीहरू पर्याप्त छैनन् कि तिनीहरू सम्पूर्ण ब्रह्मामा उजागर गर्न पर्याप्त छैनन्।
तर ब्रह्मांडमा कालाे रहनुका अन्य धेरै कारणहरू छन्।
अब हामी विश्वास गर्दैनौं कि ब्रह्माण्ड अनन्त छ। हामी विश्वास गर्छौं कि यो निरन्तर बढ्दैछ र यहाँ भएका हरेक चीजहरू संधै परिवर्तित छन । यो केवल आकार सीमित मात्र हैन तर यसको आयु पनि छ। आजभन्दा करीब १५ कराेड वर्ष पहिले बिंग बंग नामक एक धमाकाबाट हाम्राे ब्रह्माण्डकाे उत्पत्ति भएकाे भनिन्छ। जुन अहिले विस्तारै बढ्दै गइरहेकाे छ र यहाँ भएका सम्पुर्ण तारा र आकाशगंगाहरू एकअर्काबाट टाढा गइरहेका छन ।
यद्यपि तिनीहरू धेरै छिटो दौडिरहेका छैनन्, तर अझै पनि एक स्थानबाट अर्को सम्म पुग्न समय लाग्छ। जब खगोल वैज्ञानिकहरू १० लाख लाइट-वर्ष टाढा रहेका ग्यालेक्सीलाई हेर्छन्, वास्तवमा तिनीहरू १० लाख वर्ष अघि कै आकाशगंगाको अाकारमा देखिन्छन । किनभने त्याे आकाशगंगाबाट निस्केकाे प्रकाश हाम्राे अाखाँ सम्म पुग्न धेरै समय लाग्दछ । यसको मतलब भनेको दूरीबाट आउँने किरण बाटोमा नै बिलाएर जान्छ र कहिलेकाहीं हल्का स्पेक्ट्रममा रहँदैन जुन नाङ्गाे आँखाले हेर्न सकिदैन ।
खगोलशास्त्री और विज्ञान विषयका लेखक रूडॉल्फ़ किप्पेनहान भन्छन, रातकाे समयमा जब सूर्य पृथ्वीकाे ठिक विपरित दिशामा हुन्छ त्यतिबेला हामी अध्याराे नै देख्दछाै किनकि पुरै ब्रहमाण्डकाे बारेमा अझै हामीलार्इ धेरै कुरा थाहा छैन ।
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख १०, २०७५१७:५०